Jubaland maxay ku diiday go'aanka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya? - BBC News Somali
Jubaland maxay ku diiday go'aanka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya?
Image caption Doorashada Jubbaland ayaa ku aaddan bisha Agoosto, 2019-ka
Wasaaradda arrimaha gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku sharraxday mabaadii'da iyo hab raaca doorashooyinka Dawlad goboleedyada, balse waxaa arrintaas ku gacan seyray maamullada ay doorashooyinka ku fool leeyihiin.
Warka kasoo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa lagu sheegay sida ay wasaaraddu dooneyso in loo maareeyo doorashooyinka maamullada hoos taga dowladda federaalka.
"Mabda'a guud oo asalka ahi waa in la qabto doorashooyin ku dhaca hannaan dimuqraaddi ah, oo xor iyo xalaal ah. Ujeeddadu waa in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed uu u leeyahay inuu soo doorto cidda ku mataleysa hoggaanka dalka iyo inuu isu sharrixi karo xil siyaasadeed loona dooran karo. Wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka ayey tahay xilkeeda dastuuriga ah inay ka mira dhaliso hannaanka federaaleynta iyo dimuqraaddiyeynta dalka, xoojinta xiriirka iskaashiga heerarka dawladda iyo hirgalinta dawlad wadaagga", ayaa lagu yidhi qeyb ka mid ah qormada war saxaafadeedka.
Waxaa sidoo kale lagu dalbaday qodobbo ay ka mid yihiin:
1- Magacaabista guddi farsamo oo loo dhan yahay oo ka shaqeeya soo xulidda xildhibaannada dawlad goboleedka.
2- Xildhibaannada Golaha Wakiillada Dawal Goboleedka waxaa si madax bannaan usoo xulaya odayaasha dhaqanka beelaha ay kasoo jeedaan.
Hase yeeshee qodobbadan ayaa khilaafaya hannaankii ay qaar ka mid ah dawlad goboleedyada u dajiyeen inay doorashooyinka u qabsoomaan.
Labada maamul goboleed ee kala ah Galmudug iyo Jubbaland, oo la filayo inay bilaha soo socda doorashooyin ka dhacaan ayaa ku gacan seyray mabaadii'dan kasoo baxday Wasaarada Arrimaha Gudaha ee Dawladda Federaalka.
Duraan Maxamed Samatar, oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug ayaa BBC-da u sheegay inaysan la dhacsaneyn hadalka kasoo baxay dawladda dhexe.
"Waxaan u aragnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalku inay shaqadooda gudanayaan inkastoo aysan arrimo badan tix galin siinin, waxaa fiicneyd inay nagu ixtiraamaan hawsheenna, laakiin annaguna waxaan gudan doonnaa waajibaadka arrintaas nooga aaddan", ayuu yidhi Duraan.
Waxa uu sheegay in shirkii Jabuuti ka dhacay qodobadiisii ay ka mid ahayd in doorashada Galmudug ay ka dib dhacdo waqtigeeda, taasoo hadda ku aaddan labo sano iyo bar kadib.
"Doorashadeenna xilliga ay dhaceyso waxay ku qoran tahay dastuurkeenna, markii heshiiska la gaaray waxaan isku darnay labadii dastuur iyo labadii baarlamaan. Wax walba markii aan dhameystirnay dastuurkeennii wuxuu dhigayay in xilliga dib u heshiisiinta ah uu noqdo 4 sano".
Tallaabada ay mas'uuliyiinta Galmudug qaadeen ayaa u muuqata mid sii xoojineysa khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe, inkastoo qeyb kale oo ka mid ah madaxda Galmudug ay sheegeen in doorashada maamul goboleedkaas ay dhaceyso horaanta bisha Luulyo.
In muddo ahba waxaa labo qeyb u kala jaban mas'uuliyiinta maamulka Galmudug, dhinac walbana waxa uu soo saaraa go'aanno ka duwan dhinaca kale.
Image caption Madaxda Galmudug ayaa kala qeybsan
War saxaafadeed galinkii hore ee maanta oo Axad ah kasoo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay leedahay go'aanka ku saabsan hirgalinta iyo maareynta doorashadeeda.
"Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dawladaha hoose ee Dawlad Goboleedka Jubbaland waxay caddeyneysaa in ay u madax bannaan tahay, xilna ka saran yahay inay qabato doorasho xor iyo xalaal ah ee ka dhacda Dawlad Goboleedka Jubbaland", ayaa lagu yiri qoraalka war saxaafadeedka.
Horay ayey Xukuumadda Federaalka Soomaaliya u sheegtay in ay leedahay mas'uuliyad ay dusha kala socoto ama ku kormeerto hab sami u socodka doorashooyinka Dawlad Goboleedyada, inkastoo arrintaas ay ka biyo diidsan yihiin maamullada qaarkood.